Fifamaliana niteraka vono olona :: Tovolahy voatifitra, rehefa avy nanindrona antsy ny rahalahiny • AoRaha
Fifamaliana niteraka vono olona Tovolahy voatifitra, rehefa avy nanindrona antsy ny rahalahiny
Niditra an-tsehatra ny miaramila nandamina ny fifamaliana sy ny ady teo amin’ny lehilahy roa mpirahalahy tany Bekopaka, distrikan’Antsahalova, tamin’ny alin’ny alakamisy 18 jona lasa teo. Voatery nampiasa fitaovam-piadiana izy ireo ka maty voatifitra ny tovolahy iray, roapolo taona. Voalaza ho avy nandratra ny rahalahiny, dimy amby roapolo taona, rehefa nifamaly taminy tamin’ ny alalan’ny tsindron’antsy, iry farany. Nandray antanana ny fanadihadiana tamin’izao tranga izao ny zandary any an-toerana hahafantarana ny zava-nisy.
Nifamaly noho ny resaka radio ireto mpirahalahy ireto, tamin’io harivan’ny alakamisy io. Nandray antsy ary nanindrona ny zokiny avy hatrany ilay tovolahy, roapolo taona. Tsindron’ antsy telo tao an-damosiny no nandratra an’itsy zokiny. Nahita ny zava-niseho rehetra tao an-trano niaraka tamin’ izy roa lahy ny anabavin’izy ireo iray.
Tao anaty haizina
“Niantso ny miaramila sendra nandalo teo antanàna ilay vehivavy mba hijery ny zava-misy sy hisambotra an’ilay nandratra. Nampitandrina an’ireo miaramila ireo izy fa mitondra antsy ny anadahiny, ka mety hanohitra sy handratra indray. Voatifitra tao anaty haizina ilay tovolahy”, araka ny fanampim-baovao voaray avy amin’ny lehiben’ ny zandary any Melaky.
Tamin’ny fihainoana ny ray aman-drenin’ireto niharamboina no nahafantarana fa mahery setra ity tovolahy namoy ny ainy iny ity taloha. Noentina notsaboina any Belo-Tsiribihina ilay voatsindron’ antsy. Voalaza fa tsy nitory an’ireo miaramila nitifitra ny fianakaviana.
Fitsaboana ny valanaretina Afaka handray marary hatramin’ ny arivo ireo toerana vaovao
Fanodikodinana tosika fameno :: Miampanga sefo fokontany ny ankamaroan’ireo fitarainana iray alina
Lozam-pifamoivoizana :: Mpitondra môtô voasaringotry ny kamiao